Misy ny marimaritra iraisana fa miaina ny fiovan'ny toetr'andro manerantany, mitombo ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro, ary ny ankamaroan'io fiovana io dia vokatry ny asan'olombelona, ​​toy ny fandoroana ireo solika fôsily, fanapahana ala ary fambolena. Ny mari-pana amin'ny atmosfera dia vinavinaina hitombo eo amin'ny 2.5 ° C amin'ny 2100. Ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina dia voalaza fa hampitombo ny hamafin'ny haran-dranomasina ary hiteraka tafiotra mahery sy fiakaran'ny haavon'ny ranomasina. Ireo vinavina ireo dia miteraka ahiahy lehibe amin'ny hoavin'ny haran-dranomasina manerantany.
Sehatra atahorana ho an'ny tontolo iainana amoron-tsiraka miorina amin'ny fiantraikan'ny toetrandro hita sy novinavinaina. 'Andro ankehitriny' (tsipika volondavenona) dia mifanitsy amin'ny taona 2000, fa ny seha-pivoarana entona isan-karazany, RCP2.6 (tsipika manga) ary RCP8.5 (tsipika mena), dia mifanitsy amin'ny 2100. Maro ny loza ateraky ny toetrandro, anisan'izany ny fiakaran'ny marin-dranomasina, deoxygenation, asidra, fiovan'ny otrikaina, fiovan'ny karbonika bitika, ary ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina. Loharano: Bindoff et al. 2019
Antony roa lehibe no mahatonga ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina: ny fanitarana amin'ny hafanana sy ny fihenan'ny takelaka misy ranomandry, izay samy mihalehibe ao anatin'ny toetr'andro mafana. Nandritra ny taonjato lasa izay, ny haavon'ny ranomasina dia nitombo manodidina ny 2-3 mm isan-taona. ref Araka izany, maro ny mpahay siansa milaza fa ny fiakaran'ny ranomasina dia hanana fiantraikany kely fotsiny amin'ny haran-dranomasina satria ny taham-pahavelomana sy ny haben'ny fiakaran'ny ranomasina dia ao anatin'ny tahan'ny fiakaran'ny vidin-javatra (izany hoe ny tahan'ny fitomboana) amin'ny haran-dranomasina maro sy maro Ny vatohara dia eo ambany fifehezan-tseraseran'ny metatra maromaro ankehitriny. ref Na izany aza, amin'ny mizana eo an-toerana, ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina dia mety hampitombo ny fizotran'ny sedimentary izay mety hanelingelina ny fotosintesis, ny famahanana, ny fandraisana mpiasa ary ny fizotry ny haran-dranomasina hafa.
Oscillation atsimo El Niño (ENSO)
Ny El Niño Southern Oscillation (ENSO) dia fiovan'ny vanimpotoana misy ny atmosfera any amin'ny Pasifika tropikaly izay misy fiatraikany amin'ny toetr'andro manerantany. Mitranga izany isaky ny 3-7 taona (5 taona eo ho eo) ary matetika maharitra sivy volana ka hatramin'ny roa taona. Izy io dia mifandray amin'ny tondra-drano, haintany ary fikorontanana hafa manerantany. Ny hetsika ENSO dia fizotran'ny natiora ary efa anarivony maro raha tsy an-tapitrisany taona. Ny hetsika ENSO dia tsy vokatry ny fiovan'ny toetrandro, fa ny fifandraisana eo amin'ny velaran'ny ranomasina sy ny rivotra iainana any Pasifika tropika. Na izany aza, azo heverina fa azo atao ny manova ny fomba fitondran-tenan'ny El Niño ny fiakaran'ny hafanana.
Fiovana amin'ny tafiotra sy ny orana
Hatramin'ny tapaky ny taona 1970, ny tombatombana eran'izao tontolo izao ny amin'ny mety hanimbana ny tafio-drivotra tropikaly dia mampiseho fironana miakatra izay mifamatotra amin'ny fiakaran'ny maripanan'ny tropikaly. ref Ny isan'ireo oram-baratra tropikaly mahery (Sokajy 4 sy 5) dia nitombo manodidina ny 75% nanomboka tamin'ny taona 1970, miaraka amin'ny fiakarana lehibe indrindra hita any amin'ny Oseana Pasifika Indianina, Avaratra ary Atsimo Andrefana. Ny habetsaky ny tafiotra mahery tropikaly any Atlantika Avaratra dia efa mihoatra ny mahazatra ihany koa tao anatin'ny folo taona lasa. Na izany aza, ny fanatsarana ny fahafahantsika mandinika ny tafio-drivotra dia mety nanilika ireo vinavina ireo.
Rivodoza tropikaly marobe manerana an'i Karaiba. Sary © Fitantanan-dranomasina nasionaly sy ny atmosfera
Raha mihamatanjaka ny tafiotra tropikaly, dia mila fotoana lava kokoa ny haran-dranomasina hamerenana amin'ny laoniny ny fiantraikan'ny rivo-doza. Ny fiatraikany mivantana ara-batana mivantana dia misy ao fikaohon-tany sy / na fanesorana ny firafitry ny haran-dranomasina, fanesorana vatohara goavambe, vaky vatohara, ary fery amin'ny haran-dranomasina amin'ny potipoti-javatra. Ny fiakaran'ny rotsakorana mifandraika amin'izany dia mety hiteraka fahasimbana lehibe kokoa amin'ny haran-dranomasina koa noho ny fiakaran'ny rano, ny rano velona an-tanety an-tanety ary ny zavatra mahavelona avy amin'ny rano amoron-dranomasina ary ny fiovan'ny fitaterana antsanga (mitarika fanapoahana vato harana).
Course Online Resilience Coral Reef, Lesona 2: Fandrahonana ho an'ny Coral Reef
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMisy fiatraikany amin'ny haran-dranomasina ny fiovan'ny toetrandro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Coral Reef Watch Satellites sy Coral Bleaching
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEfecto del Huracán Delta en los arrecifes del Norte de Quintana Roomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahasimban'ny haran-dranomasina nateraky ny Rivo-doza tany Karaibamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDaños Causados ​​por Huracanes a los Arrecifesmanokatra fisie PDF